Ezikhangayo Ezingokwemvelo Kanye Nezenzo eyenziwe e-United States of America
Izigidi zezivakashi ngokuvakashela kwelinye lamazwe esikhulu kunazo zonke emhlabeni ubunyoninco Amazing izimangaliso zemvelo kanye izikhumbuzo wadala umsebenzi wezandla zomuntu. United States ezikhangayo kuyokushiya umangele ngisho abahambi onokuqonda kunazo ngubani dream of a umhlangano omusha nge izindawo zomlando ngokushesha ngemva kokuphela uhambo.
Kuyinto engenakwenzeka niyikhulume zonke izingxenye ezithakazelisayo yezwe omkhulu, ngakho ukugxila izindawo zemvelo, sekuyisikhathi eside uthathwa njengoba amakhadi ibhizinisi.
History of the lesikhumbuzo
Uma kuziwa America, Statue of Liberty - inhlangano yokuqala ezenzeka bonke abantu. Kuyinto isakhiwo edume kunazo yezwe, obonwa amagugu esizwe kusukela 1924. umlando ezithakazelisayo we ebaziwe giant ku amamitha 46 ukuphakama.
Umqondo ukwakha lesikhumbuzo kungokwalabo mlando French de Laboulaye, ngubani engu-150 edlule uzonikeza Melika isithombe njengoba iwuphawu ubungani phakathi kwalawa mazwe amabili. umqophi Young Bartholdi, liphefumulelwe Umdwebo edumile by Delacroix, "Liberty ehola abantu ukuba ngothango," waya States lokunquma esikhundleni ukufakwa lesikhumbuzo esizayo.
ekukhetheni kwaKhe yawa phezu kwezinsizwa itheku laseNew York, ezazidume ngokutshala iziphepho ezinamandla. Ukuthatha abasizi we umdali esizayo i-Eiffel Tower, thatha ukufaka design ngamandla, Bartholdi wadala ngo-1884, kwamiswa itshe lesikhumbuzo le Statue of Liberty ku imali yomphakathi Franco-American.
Izethameli lokuqala 200 ton sibalo insikazi ithoshi e isandla sakhe esiluliwe French waqala, zibabaza imisebenzi izinyanga ezintathu, okwathi ngemva kwalokho ngokusemthethweni etandleni Melika. It is mayelana 214 izindiza ezaziwa, ethutha abe ingxenye Isiqhingi Benkululeko (Bedlow), lapho wahlangana no yonke imikhumbi abokufika.
Ngo-2012, lesikhumbuzo, lapho abantu bendawo babiza "Lady Liberty", ivaliwe umsebenzi wokuvuselela izakhiwo. A lonke ngonyaka waya umsebenzi wokulungisa, ngemva kwalokho esifanekisweni usezuze zommbila yesimanje kanye nezinhlelo zokuphepha. Manje wonke umuntu uzokwazi ngaphandle nobunzima ukugibela ezitebhisini Kuvunguza okuholela emifanekisweni umqhele elinemisebe eziyisikhombisa.
amathikithi Ukuthengwa ukuba umlingisi waseMelika, afakwe UNESCO uhlu ifa, kunconywa kusengaphambili, njengoba ngosuku ubunyoninco isifiso esifanekisweni ukuze abantu abayizinkulungwane 20. Zilungiselele for ukuxilongwa okujuli- ukuze ugweme ukuhlaselwa siqu.
I "Disneyland" lokuqala emhlabeni, wavula ngo 1955 - kuyinto enkulu ipaki nesamanje United States ezikhangayo, okuyinto abafuna izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Unforgettable fun umndeni isikhungo, eyakhelwe izingane, abantu babo bonke ubudala simdumise. Kukhona ungaziqhenya like a kid uvakashele castle ezimibalabala-Sleeping Beauty, ukuvakashela kulesi siqhingi elincane Peter Pan, eziphonsa ezweni adventure Indiana Jones.
American "Disneyland" (CA) waba sibonelo kuzo zonke indaba ephathwayo amapaki yalolu hlobo. It ukusungulwa nge opopayi lwasemaphusheni emhlabeni emangalisayo ukunakekelwa zezingane egcwele ugibele ezithandekayo yamathanga ezimibalabala. Yini kungaba kuhle kunokukhanya ukuhlangana kanye nokwabelana ngezithombe izinhlamvu abawuthandayo, ajwayelekile kusukela ebuntwaneni?
Minyaka yonke, omkhulu kakade endaweni yezitolo uyanda. Manje kuyathandeka ngqo "Disneyland" futhi Disney sika California nokuzidela ukuzijabulisa malyshni, ehlukile Uhlezi endaweni abadala nge isikhumbuzo izitolo, izitolo okukhethekile, zokudla eziningi futhi ezintathu ehhotela zikanokusho, lapho ungahlala nomndeni wakho. Hambisa komunye indaba ephathwayo epaki komunye kungase kube ku-isitimela ujantshi ubudala, babeka yonke indawo "Disneyland."
Isibhakabhaka ebusuku okukhulunywa ngaso nge izibani ezimibalabala iziqhumane, ngoba umdlalo ejabulisayo umlilo nomculo kufanele uhlale isihloko epaki phambi wavalwa. Fantastically show emangalisayo sokujabulisa esikalini nje kuphela izingane kodwa abazali eselunyuliwe izimangaliso isimanga.
The izinto umxhwele kakhulu wase-United States of America akuyona njalo wadala umsebenzi wezandla zomuntu. Akhiwe Arizona, Grand Canyon uyisibonelo esikhulu ukuguguleka Colorado River, emakhulwini amaningi eminyaka ishayise limestone yasethafeni eseduze.
Ancient idwala oluthambile negwadle, ecashile lesikhumbuzo zemvelo, ababethi umbala obomvu, futhi kwakhiwa eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu emibili eyedlule. Thunzi efanayo liyidlive Colorado River amanzi kusukela slurry of isihlabathi nobumba.
Ngo-1919, ithola yonyaka National Park izivakashi abangaphezu kwezigidi ezinhlanu yasungulwa lapha ngonyaka. Grand Canyon Colorado - an amazing isimangaliso zemvelo, ngifuna bekude like surface bushelelezi, futhi kuphela khona kanye onqenqemeni yasethafeni kwembula we ensungubezini ukujula elithakazelisayo, banzi njalo ngonyaka. Abavakashi uthande ukuthatha izithombe kwalasha lapho bengeke benze umhosha, ngemva leaching of amatshe egcwele amafomu angajwayelekile wokukhululeka, lapho ngamunye divines okuthile eyabo.
Kwenzeka isimanga, lesi canyon kushintsha umbala kuye ukukhanya: imibala emnyama kufakwe imisebe yokuqala ilanga anombala ocwazimulayo pink bluish.
United States of America Izikhangibavakashi kuthinte bemibuso angaphandle kanye nokuzijabulisa. Mayelana izingxenye ekhumbulekayo kungaba naye isikhathi eside, kodwa kungcono ukuzama ukubona ngamehlo abo ukuthi Iyokhunjulwa phakade.
Impilo resort Omsk "Dawn": iphrofayela ngezokwelashwa kanye nemisebenzi
Indawo enhle uphumule - Kaluga esifundeni. Nezokungcebeleka isikhungo ngamaholidi: yini ukukhetha?
Mzimta (umfula): ukuvakasha, lolwandle (isithombe)
Ecuador engaziwa lapho likhona futhi igama nekomkhulu lalo
I zokungcebeleka best of laseStavropol Territory
Ibhuloho of Lovers ekhatsi Kiev: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
Amadolo pads izingane - nokuvikelwa uma umonakalo
Ukudoba lokunyenti, ngabe tinkomishi
Salsa: kadokotela. Unagi futhi izoso - evelele ngomkhosi wakho
CPL-okukuhlunga nokwehlukana isiyingi. izifundo izithombe
Izinzipho Ingrown: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Indlela sifundisa imiyalo yakho inja?
Umuthi 'Maalox "- yokusetshenziswa
Amathiphu zezingane imenyu lokuzalwa
Istanbul ngoNovemba. Amaholide futhi iholide e Istanbul ngoNovemba
"Embezzler" (zomculo): ukubuyekezwa, abalingisi, abalobi
Indlela yokupompa amantombazane esilwane? Ukuzivocavoca okulula kepha okuphumelelayo